Hledan Community Public Library
ကမာရွတ် အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်
လှည်းတန်းCentreမှာ အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Hledan Community Public Library???????????????????? အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၁၉ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့မှာ စာကြည့်တိုက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။
"လှည်းတန်းစင်တာမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ စာဖတ်ဖို့နဲ့ အပြင်က ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး" ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်မှူးက ကိုစည်သူအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
လှည်းတန်းစင်တာ သုံးလွှာမှာရှိပါတယ်။ ဈေးဝယ်စင်တာရဲ့အပေါ်ဆုံးထပ်မဟုတ်ပါ။ သုံးလွှာက ဓာတ်လှေကားရဲ့ညာဘက်မှာပါ။၅လွှာမှာအခန်းနံပတ်( 503-504)က ရုံးခန်းပါ။ သုံးလွှာမှာ စာအုပ်ငှါးဖို့????????????????နဲ့ registration???????????????? လုပ်ဖို့ပါ။ member cardလုပ်ဖို့်ဆိုရင် ၅လွှာကိုသွားရပါတယ်။စာကြည့်တိုက်ကနည်းနည်းတော့
ကျဉ်းပေမယ့် စွမ်းအင်ချွေတာတဲ့အနေနဲ့ နေရောင်ကိုသုံးထားပါတယ်။ မှောင်လာရင်တော့ မီးဖွင့်ပေးတယ်။
ကားနဲ့သွားလို့ရတယ်။???????????????? လမ်းလျှောက်သွားလို့ရတယ်လို့????️‍♀️????️‍♀️????️‍♀️ မပြောပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့်လဲဆိုတော့ ဓာတ်လှေကားကို ကဒ်နဲ့တက်ရမှာဆိုတော့ ပထမကြိမ်သွားတဲ့သူတွေအတွက် နည်းနည်းတော့ အခက်တွေ့မှာ။ ကျွန်တော်လိုမျိုးကြာင်တောင်တောင်နဲ့ ဟိုလူ့မေး၊ဒီလူ့မေးဖြစ်မှာဆိုးလို့ပါ။ စင်တာမှရှိတဲ့ ဓာတ်လှေကားတိုင်းနဲ့တက်လို့ရပါတယ်
ဒါပေမယ့် ပထမထပ်က The Face Shopနဲ့ Samsung ကြားမှာရှိတဲ့ ဝင်ပေါက်ကိုသွားစေချင်ပါတယ်။ ဝင်ပေါက်ကို အောက်မှာဓာတ်ပုံပြထားပေးပါတယ်။ ဟိုရောက်ရင် securityကိုသုံးလွှာသွားချင်လို့ပြောလိုက်ပါ။ သူတို့ကဒ်နဲ့သုံးလွှာကိုပို့ပေးပါ့မယ်။ သုံးလွှာရောက်ရင် ဓာတ်လှေကားရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိပါတယ်။ စာကြည့်တိုက် ထဲမှာဝန်ထမ်းအစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိတယ်။ စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်ချင်လို့ပြောလိုက်ပါ။ register လုပ်ပြီး member cardထုတ်ပေးမှာပါ။ Member Cardနဲ့ပဲ စာကြည့်တိုက်တံခါးဖွင့်ရမှာပါပြီးတော့ အဲcardနဲ့ အတက်အဆင်းလုပ်၊ စာအုပ်ငှါးရမှာ။
စာကြည့်တိုက် မှာအသင်းဝင်ဖို့အတွက် #memberCardလုပ်ရပါမယ်။ MemberCardလုပ်ဖို့်ဆိုရင်
ဓာတ်ပုံ ၁ပုံလိုမယ်????????????။ လိုလိုမယ်မယ်် ၂ပုံထည့်သွားပါ။ ကျောင်းသားကဒ် or မှတ်ပုံတင်(မူရင်း)ယူသွားပါ။ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူး အလကားလုပ်ပေးပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ၃လွှာမှာ registration formဖြည့်ရမယ် ပြီးရင် အဲဒီစာရွက်နဲ့ member Cardလုပ်ဖို့ အပေါ် ၅လွှာအခန်းနံပတ်( 503-504)ကို သွားရပါ့မယ်။ cardရဖို့ ၁၀ မိနစ်၁၅ မိနစ်စောင့်ရမှာပါ။
ကဒ်ရသွားပြီးရင် စာအုပ်စငှါးလို့ရပြီး ကြိုက်တဲ့ဓာတ်လှေကားနဲ့ အတက်အဆင်းလုပ်လို့ရပြီး။ စာကြည့်တိုက်တံခါးကိုကဒ်နဲ့ ဖွင့်ရပါ့မယ်။ ပိ်တ်ရက်မရှိ မနက်၉နာရီကနေ
ညနေ၅နာရီအထိအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အများဆုံး ၃အုပ်ငှါးလို့ပြီး ငှါးချိန်တစ်ပတ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
် အချိန်ကျော်သွားရင် ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်ပျက်စီးသွားတာဆိုရင် စာကြည့်တိုက်ရဲ့ စည်းကမ်းချက်အတိုင်းလိုက်နာရမှာပါ။
စာအုပ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်။ စာအုပ်အမျိုးအစားတွေကတော့ မဂ္ဂဇင်း၊ ရုပ်ပြ၊ အထွေထွေ၊ ဒသနိကဗေဒ၊ ဘာသာနဲ့အယူဝါဒ၊ လူမှု့ရေးသိပ္ပံ၊ ဘာသာစကား၊ ရိုးရိုးသိပ္ပံ၊ အသုံးချသိပ္ပံ၊ အနုပညာနဲ့အားကစား၊ စာပေ၊ ပထဝီနှင့်သမိုင်းပညာ၊ ဝတၳုများ အစရှိတဲ့စာအုပ်တွေကို ဖတ်လို့ရပါတယ်။ စာအုပ်အရေအတွက်နဲ့အမျိုးအစား